Wiil 14 jir ah oo Rasaas la dhacay Ardaydii Iskuulkiisa ka dib markii ay ku daadisay Gabar uu jeclaa, (Daawo kala cararka dhacay) - iftineducation.com
iftineducation.com – Magaalada Memmingen oo ku taal gobolka Bayern ee dalka Germany ayaa waxaa ka dhacay qiso Cajiib ah ka dib markii lagu kala cararay goob Iskuul ah oo uu labo Bistoolad la soo dhex galay Wiil yar oo 14 jir ah.
Wiilkaan yar oo Rasaasta ka soo bilaabay banaanka Iskuulka ayaa waxaa dhacday mar qura inay kala cararaan Macalimiintii iyo Ardaydii goobtaas wax ku baraneeysay waxaana goobtaas si deg deg ah ku yimid Ciidamada Booliiska oo dhoor Saacadood Rasaas weeydaarsaday Wiilkii yaraa ee ku xanaaqay Ardayda Iskuulkiisa.
Hubka uu ku Dagaalamayay Wiilkaan yar ayaa waxaa la sheegay inuu ka soo xaday Armaajada Aabaha dhalay oo heeystay Hub sharciyeeysan maadaama uu yahay shaqsi u shaqeeya Bankiyada Lacagta lagu keeydsado.
Wiilkaan 14-jirka ah oo ugu dambeeyntii rasaasta ka dhamaatay waxaa iminka gacanta ku dhigay Ciidamada Booliiska wuxuuna sheegay falkaas inuu u sameeyay ka dib markii ay ku daadisay gabar uu jeclaa oo hadalka ka goosatay taas oo iyana dhigata Iskuulkaas .
Wiilkaan yar ayaa markii la qabanayay waxaa laga soo qabtay goob Kubada lagu Ciyaaro oo banaanka Iskuulka ku taalay xili uu doonayay inuu ka boodo darbiga dambe ee Iskuulka waxaana Gabadhii uu jeclaa ee ku daadisay lagu sheegay 13 jir.